Akụkọ - Kedu usoro 6 n'ime usoro ihicha site na iji igwe na-asacha akpaaka Glassware?
Kedu usoro 6 n'ime usoro ihicha site na iji ihe ncha akpa Glassware?
Kedu usoro 6 na usoro nhicha site na iji aIgwe ihe ncha akpa akpaaka?
Laboratory Glassware Washerbụ igwe nhicha na-arụ ọrụ dị iche iche emebere ma mepụta maka ndị ọrụ ụlọ nyocha.Ọ nwere ike na-eji maka ihicha ngwá, pipeline, arịa ma ọ bụ fermenters, wdg O nwere nnukwu oghere olu, elu loading mgbanwe, obosara kemeghi ihicha okpomọkụ nso, elu nkenke akara nyocha ihicha ọrụ, wdg, nke ukwuu mma nke onye ọrụ na-arụ ọrụ arụmọrụ.Ụzọ dị nro na nke dị irè nke idozi, nke mere na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị mmebi nke iko iko.
Ma ọ na-pụrụ iche e mere maka oke ohere, na ike-adị mfe enịm ke okpokoro ma ọ bụ tebụl, echichi dị mfe, naanị mkpa ọkụ eletrik njikọ, mmiri oyi na mmiri mkpofu ọgwụgwọ, ọ na-tumadi ji disinfection na laabu glassware ihicha okpomọkụ, ihe nlereanya na-agụnye. arụrụ arụ ọrụ nhicha na ihicha, ngwaọrụ ahụ bụ iji belata ma kpochapụ ihe ize ndụ ndị sitere na ijikwa ihe ndị na-efe efe dị mma.Enwere ike iji ya maka nhicha ụlọ nyocha ụlọ nyocha na nnukwu ikike na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, nke nwere ike izute ihe ndị a chọrọ ugbu a iji melite ogo njikwa ihe eji enyo enyo.
The ihicha na decontamination usoro nkeỤlọ nyocha akpaaka Glassware Washernwere usoro 6: nhazi ọkwa, ntinye, ihicha, nchacha, disinfection na ihicha mgbe ihicha ngwá ọrụ.
1. Nhazi: Kewaa ngwaọrụ ahụ ozugbo ejiri ya, ma gbalịa ka ị ghara ịhazi ya ozugbo site n'aka;A ghaghị ibufe ihe ndị dị nkọ n'ime akpa ndị na-adịghị mma;Ekwesịrị idowe unyi mmiri ka ọ ghara ikpochapụ.Ọ bụrụ na enweghị ike ihicha ya na oge n'ime 1 ~ 2h, a ga-etinye ya na mmiri oyi ma ọ bụ mmiri mmiri nwere enzyme.
2, ntanye: ntanye nwere ike igbochi unyi akọrọ wee mee ka ọ dị nro ma ọ bụ wepụ unyi;N'ihi na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke organic mmetọ ma ọ bụ mmetọ akọrọ nwere ike tinye ya na enzyme Cleaner kwesịrị>2min.
3, ihicha: ntuziaka ihicha na n'ibu ihicha, kpọmkwem ihicha usoro ịhụ ihicha na decontamination usoro.Usoro ọgwụgwọ mbụ maka ihe ndị na-emerụ emerụ nke ukwuu gụnyere ịsa ihe na-ehicha ihe, ịsacha (nyochaa), wee jiri usoro nhicha ụlọ nyocha.Ụzọ ihicha maka nkenke na ngwa ndị dị mgbagwoju anya gụnyere ịsacha, imi mmiri, ịsacha (nhịhịa), wee ihicha igwe.
4. Na-asachapụ: mgbe ihicha akwụkwọ ntuziaka, kpochaa na mmiri mgbata wee kpochaa ya na mmiri deionized.Jiri mmiri deionized sachaa maka igwe nhicha.
5. Disinfection nke ngwá ọrụ mgbe ihicha: jiri thermal ihicha na disinfection igwe maka ihicha na disinfection, na disinfection okpomọkụ bụ> 90 ℃ maka 1min ma ọ bụ A0> 600 maka ọkara na ala dị ize ndụ isiokwu na akụrụngwa;Ihe egwu dị elu na okpomọkụ akụrụngwa>90 ℃5min ma ọ bụ A0>3000.
6, akọrọ: mgbe ịsachara, ihe mmiri mmiri kwesịrị ka akpọnwụ ma ọ bụ akpọnwụ ya ozugbo enwere ike.Enwere ike iji igbe ihicha ihicha ngwa.Ịkpọ nkụ okpomọkụ 70 ~ 90 ℃.N'ozuzu, oge ihicha nke ngwá ígwè bụ nkeji 15 ruo 20, ebe oge ihicha ngwá ọrụ rọba na-adị ogologo, dị ka ọkpọkọ ikuku ventilat, 30 ruo 40 nkeji.
Oge nzipu: Feb-25-2022